Laos " Journey-Assist - Ny tena mahaliana sy mahasoa momba ny Laos
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Laos
Fampahalalana ankapobeny. Inona no tokony hatao any Laos
Toetr'andro sy toetrandro any Laos
Serasera finday sy Internet any Laos
Vola Laos. Fifanakalozana fifanakalozana. Bank sy ATM
Fiantsenana ao Laos. Seveniry
Fivarotana ao Laos
Sakafo sy sakafo any Laos
Inona avy ireo loza atsy ao Laos
Hihaona any Laos!
Laos dia azo antsoina hoe firenena manoka-tena indrindra ho an'ireo mpizahatany any Azia Atsimo Atsinanana. Mbola mitohy hatrany ny fizahan-tany faobe. Tonga any Laos ny ankamaroan'ny mpandeha solo tsy miankina. Ho an'ireo maniry ny fahitana dia afaka safidy lehibe ity firenena ity.
Tsy arabe voahaja io ary mbola tsy norobain'ny mpizaha tany tamina faribolana tsara tarehy be dia be sy ny valan-jaza fonenan'ny mponina an-tapitrisany.
Inona no tokony hatao any Laos
Ho an'ny fizahan-tany, ny firenena dia mariky ny tempoly taloha, ny kolontsaina manan-karena, ny fahasamihafana misy ny foko ary ny toetra manankarena indrindra.
Tsy azon'i Laos ny ranomasina na ranomasina, izay midika fa tsy mety eto ny fialantsasatra amoron-dranomasina. Fa ho an'ireo tsy laharam-pahamehana amin'ny torapasika kosa dia hatolotry ny Laos, ho fanampin'ireo atintona ara-kolontsaina, riandrano maro, lava-bato, renirano any ambanin'ny tany ary ambanin'ny tany, ary koa tendrombohitra marina ahafahanao manao fandaharana feno.
Ny tsy fisian'ny tora-pasika sy fizahan-tany fonosana be dia be ahafahana mankafy ny fandriampahalemana ho an'ireo reraka an'i Thailand na Vietnam, izay be mpizahatany.
Ny karazan'asa taloha ho an'ny mpizahatany any Laos dia ny fitsidihana tempoly maro, ny fitsangantsanganana amoron-drano am-polony, ny fitsangatsanganana anaty ala mikaroka fantsom-bavony, ny fiakarana tendrombohitra. Eto ianao dia afaka manofa trano kely iray manontolo ho anao, izay misy an-jatony any amin'ny faritra lehibe indrindra amin'ny reniranon'i Mekong.
Toetany sy toetrandro any Laos
Ao Laos, ny tsika eatra sy ny subtropika dia mitambatra. Maherin'ny antsasaky ny faritry ny firenena no rakotra tendrombohitra, ka matetika ny andro no mangatsiaka.
Ao amin'ny Laos, vanim-potoanan'ny klima 3 no azo atao.
Fotoam-pahavaratra - manomboka amin'ny volana aprily ary mifarana amin'ny Mey. Mandritra io vanim-potoana io dia mahatratra +40 ny mari-pana indraindray.
Vanim-potoana - manomboka amin'ny volana Jona ary mifarana amin'ny Oktobra. Mampiavaka ity vanim-potoana ity ny oram-be mivatravatra matetika ary tsy dia ny mari-pana amin'ny rivotra be.
Vanim-potoana maina - manomboka amin'ny Novambra ary mifarana amin'ny volana martsa. Ity no fotoana mety indrindra amin'ny fizahan-tany satria saika tsy misy orana ary ny mari-pana amin'ny rivotra dia midina amin'ny ambaratonga tena milay.
Amin'ny alàlan'ny lehibe dia maharitra mandritra ny taona daholo ny fizahantany mpizahatany any Laos. Na izany aza, ny vanim-potoana mafana sy mando dia mbola miteraka fahasahiranana kely noho ny hafanana sy ny orana matetika. Raha mikasa ny hanao dia mavitrika ianao mandritra ny dia any amin'ny faritra be tendrombohitra any amin'ity firenena ity, dia tsara raha tsy misafidy vanim-potoana ho an'ny dia, satria orana mivatravatra ny lalana izay efa ambany be ny kalitao ao Laos.
Ny mari-pana amin'ny rivotra isam-bolana
Ny mari-pana amin'ny hafanana isam-bolana. Laos
Ny orana isan'andro isam-bolana. Laos
Weather in Laos anio
Ity ambany ity dia Widget iray mifandraika izay ahafahanao mahita ny toetr'andro ankehitriny ao Laos. Azonao atao ny manova ny sosona aseho (mari-pana, hamandoana, rivotra, oram-baratra, sns.)
Ao Laos, ny serasera finday no novolavolaina tsara. Ny faritra fandrakofana dia mandrakotra ny faritra manontolo ao amin'ity firenena ity, saingy ny kalitaon'ny fifandraisana dia miovaova amin'ny toerana samihafa. Ny Internet dia amboarina amin'ny fomba mahazatra. Ny hotely maro dia manana Wi-Fi maimaimpoana. Manana laisoa internet koa i Laos.
Hanome anarana ny mpandraharaha finday lehibe any Laos izahay.
LaoTelecom no mpandraharaha finday lehibe any Laos. Ao amin'ny ankamaroan'ny tranga be dia be ny mpizahatany no maniry. Ny fahalemeny dia tsy hita afa-tsy any amin'ireo faritra be tendrombohitra any amin'ny firenena. Raha tsy izany, safidy azo ekena mihitsy izany.
LaoTelecom manana fitaterana 3G faran'izay tsara indrindra eto amin'ny firenena.
Tranonkala - https://www.laotel.com/
Fandanjana mandanjalanja - * 122 #
Tigo Lao (Beeline)
Tigo - mpandraharaha finday ao Laos
Mifantoka kokoa amin'ny mponina ao an-toerana ny mpandraharaha finday. Saingy misy ny tahan'ny trosa amin'ny mpizahatany ihany koa. Tsy nisy 3G ho an'ity operator ity. Saingy hatramin'ny taona 2017, tamin'ny alàlan'ny korontana sarotra dia lasa fananam-panjakana ny orinasa, raha ara-teknika dia lasa fananan'ny orinasa Beeline. (VimpelCom Lao Company Ltd).
Hatramin'ny taona 2017 dia andrana 3G no natsangana. Nampahafantarina ihany koa ny fampidirana ny Internet 4G fa tsy mbola nifindra noho ny fanambarana ny raharaha.
Tsy nifarana teo ny tantara 🙂
Amin'ny 2019 Jolay 13. Nanova ny anarany ny orinasa TPLUS Digital Co, Ltd. Ary nanomboka niantso tena ny mpandraharaha finday Tplus
Serivisy serivisy TPLUS / Beeline (Tigo taloha)
* 120 # - Fitantanana kaonty
* 121 * XXXXXXXXXX # - Amboary ny kaontinao
* 122 # - Zahao ny fandanjalanjanao
* 123 # - Mitadiava fanampiana avy amin'ny serivisinay mpanjifa
Hanova fiteny fampandrenesana - * 120 # 5
Site ofisialy https://tplus.la/
Mahaliana ilay mpanodina satria miasa tsara any amin'ireo faritra be tendrombohitra izy io, izay tsy mampiseho ny kilasy avo ny ambiny.
Site ofisialy http: //www.etllao.com
Ny mpikirakira finday dia manana salan'isa mahafinaritra ho an'ny mpizahatany, ary koa ny 3G sy 4G, fa araka ny fandinihana, dia mbola ambany ny kalitaon'ny serasera ary ny Internet. Toy izany koa ny ambany ny serivisy serivisy.
Tranonkala Ofisialy - http://www.unitel.com.la/
Vola, fifanakalozana vola, karatra banky
Ny volan'i Laos dia antsoina hoe kip. Kaody iraisam-pirenena - LAK
Currency of Laos. Kip (LAK)
Tafiditra amin'ny fomba ofisialy, bale 1 dia mizara ho atomika 100, fa raha ny tena izy dia tsy nampiasaina ela ireo atom ireo noho ny fihenam-bidy. Amin'izao fotoana izao, misy tsipika mivezivezy miaraka amin'ny sandan'ny 500, 1, 000, 2, 000, 5, 000 ary 10 bales. Tsy fahita firy ny volan'ny banky amin'ireo antokom-pinoana roa farany.
Inona no aseho amin'ny vola taratasy an'i Laos "Kip"
Ny manamarika fa amin'ny volon'ireo antokom-pivavahana rehetra dia sarin'ilay olona mitovy. Izany dia Kason Fomvihan - ny mpanorina ary lohan'ny sosialista Laos teo aloha.
Ny taratasim-bola tsirairay avy dia tsy maintsy mampiseho ny akanjo fiarovan'ny firenena - stupa lehibe, tohodrano, tanimbary, lalana asfalta ary fitaovana, ho mariky ny mekanisialy.
Tokony ho tsaroana fa ny bales saika na aiza na aiza dia tsy ekena ny fifanakalozana any ivelan'i Laos, ka tsy mitombina ny fanesorana azy ireo any amin'ny firenena (afa-tsy ny fahatsiarovana sy ny fanangonana).
Fifanakalozana fifanakalozana amin'ny Laos
Ny fifanakalozana fifanakalozana ara-dalàna dia atao amin'ny seranam-piaramanidina, banky, birao fifanakalozana, hotely, trano fisakafoanana. Ny fomba mahasoa indrindra dia natolotry ny banky. Ho an'ny hotely sy trano fisakafoanana, ny tahan'ny dia tsy mahasoa, fa ao amin'izy ireo ihany no azo atao ny fifanakalozana amin'ny hariva sy amin'ny faran'ny herinandro, rehefa mihidy ny banky.
Ireo mpanakalo vola eny an-dàlana dia mety hamitaka amin'ny taha mahasoa kokoa noho ny banky, saingy miezaka matetika izy ireo hamitaka. Ny fomba hosoka malaza indrindra avy amin'izy ireo dia ny fiezahana hanome naoty 1-kip miaraka amin'ny 000 (ivelany, ireo volavolan-dalàna ireo dia mitovy).
Banky 1000 kapoaka
Ankoatry ny bales, i Laos na aiza na aiza dia mandray ny dolara amerikana sy Baht any Thailandy. Matetika amin'ny vidin'ny vidiny dia aseho avy hatrany amin'ireto vola telo ireto ny vidiny.
Karatra plastika any Laos
Azo atao ny mandoa miaraka amin'ny carte de crédit (Mastercard na Visa) afa-tsy amin'ny andrim-panjakana lehibe (fivarotana, trano fisakafoanana, trano fandraisam-bahiny) izay saika mivoaka irery any Vientiane.
Mbola tsy misy ATM ao amin'ny tanàna maro any Laos (na dia any amin'ny tanàna lehibe aza dia misy ATM maro). Ny banky sasany dia manana serivisy amin'ny famatsiam-bola amin'ny karatra, na izany aza ny vaomiera iray hatramin'ny 5% ny vola nesorina dia omena an'io.
Bank any Laos
Misokatra amin'ny alatsinainy hatramin'ny zoma ny banky any Laos, matetika manomboka amin'ny 8 a.m ka hatramin'ny 17 p.m. na 17.30 p.m. miaraka amin'ny fiatoana manomboka amin'ny 12 a.m ka hatramin'ny 13 p.m.
Inona ny vola raisinao amin'ny Laos
Amin'ireo vola ao anaty vola dia mitombina ny mitondra any Laos fotsiny dolara. Euros tsy ekena hatraiza hatraiza (ary aiza no eken'izy ireo dia somary tsy mahasoa ny tahan'ny). Ny fifanakalozana sasany dia manaiky rubles rosiana, fa ny teboka toy izany dia tsy hita ao Vientiane, Vang Vieng ary Luang Prabang ihany koa, ary tsy mahakivy ihany koa ny tahan'ny fifanakalozana any aminy.
Fiantsenana ao Laos
Tsy mety amin'ny famerenam-barotra feno i Laos, fa mendrika hividy souvenir vitsivitsy ihany eto. Ny valizy, valizy, akora vita amin'ny tanana atolotra eto, valala vita amin'ny landy, harona vita amin'ny kofehy, firavaka, hazo, taolana, hoditra sy vokatra vita amin'ny harona (harona, saribakoly, sambo, sns). Ho an'ny fanamboarana souvenir, hazo vita amin'ny eksotika dia matetika ampiasaina amin'ny firenentsantsika, ohatra, ny manga sy ny rofia. Azonao atao ny mividy tincture misy alikaola miaraka amin'ny bibilava, androngo, maingoka ary totozy amin'ny tavoahangy.
Aza adino ny manakalo eny an-tsena!
Eny an-tsena sy magazay kely any Laos, toy ny saika manerana an'i Azia dia tokony hiady varotra ianao. Ny haavon'ny vidiny eto anefa dia maotina amin'ny voalohany, fa ny mpivarotra kosa mampihena an-tsitrapo azy io, na dia vahiny aza ny mpividy. Raha misy mpivarotra iray miziriziry mandà tsy hiala amin'ny vidiny dia afaka mankany amin'ny fivarotana eo akaiky eo ianao (na mankany amin'ny mpivarotra akaiky hafa) miaraka amin'ireo entana ireo.
Raha nahare ny mpivarotra manaraka fa tsy nahomby ny fividianana vokatra tamin'ny teo aloha tsy misy vidiny dia omena anao vidiny kely kokoa.
Tsipika any Lasos
Amin'ireo baza vaventy voalohany indrindra, Talat Sao ao Vientiane no mendrika hisaina. Eto ianao dia afaka mahazo mora vidy saika ny zavatra rehetra. Ny akanjo vita amin'ny landihazo dia ilaina indrindra, arakaraka ny kalitao mendrika indrindra amin'ny vidiny mora.
Bazaar renivohitra iray hafa, Kuhadin, namboarina bebe kokoa ho an'ny vahoaka Lao ny tenany fa tsy ho an'ny mpizahatany, noho izany ny vidiny eto dia ambany kokoa noho ny an'i Talat Sao.
Ny tsena fahatelo manandanja indrindra ao Vientiane sy Laos rehetra dia i Thong Khan, any amin'ny faritra avaratry ny tanàna. Izy io dia manana safidy tsara amin'ny zavatra haingon-trano.
Misy trano bidy ao amin'ny renivohitr'i Laos, izay misokatra amin'ny promonade Mekong miaraka amin'ny fiandohan'ny haizina. Kely kokoa ny vidiny eto raha ny tsena voalaza etsy aloha. Amin'ny alatsinainy alina dia matetika mihidy ny bazaha amin'ny alina.
Souvenir avy ao Laos
Ireo fivarotana lehibe no miasa manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 16, ny fivarotana kely dia afaka misokatra mandra-pahatongan'ny 21. Taorian'ny fiafaran'ny vanin-taona maina (izay mampiavaka ny hetsika mpizahatany ambony indrindra), ny varotra miaraka amin'ny fihenam-bidy dia manomboka any Laos.
Ny sakafo Lao dia manana endri-javatra somary aziatika any Azia Atsimo Atsinanana ary tena voataona ny sakafo Vietnamese, Thai sy Kambojiana. Ohatra, ny lasopy voatabia Thai Tom Yam sy lasopy Vietnamese dia malaza be amin'ity firenena ity.
Ny vokatra lehibe indrindra dia ny vary, izay ampangotrahina (anaty rano sy haohana) ary endasina. Ny karazany malaza indrindra ao Laos dia ny vary fota, izay matetika no mihinana tsotra ny tanana amin'ny tanany, tsy misy koba-toto, atsoboka amin'ny saosy isan-karazany.
Ny lafiny iray hafa amin'ny nahandro Lao dia ny haben'ny legioma, ary koa ny anana toy ny sakamala sy sakamalao.
Ny mofo frantsay dia be mpitia any Laos.
Koa satria voarindra io firenena io, ny hazan-dranomasina rehetra ary saika ny trondro eto daholo. Any Laos, dia trondro renirano ihany no tratr'izy ireo. Na izany aza, io trondro rano madio io dia matsiro be, ohatra, eo amin'ny familiana, manempotra amin'ny ravin'ny hazo akondro.
Lovia Exotic any Laos 🙂
Amin'ireo lovia exotic, ankoatry ny bibikely atody, ny voalavo voanio dia mijanona ao Laos.
Voalavo taraina 🙂
Saingy, amin'ny toerana mpizahatany malaza dia tsy izy ireo. Tsy ao an-tanàna lavitra lavitra no hahitanao izany lovia izany. Mihinana hena amin'ny alika koa ny sasany.
Ny loza ateraky ny Laos
Laos azo antsoina hoe firenena somary azo antoka. Na eo aza ny fari-piainan'ny mponina, ambany dia ambany ny heloka bevava, sariaka ny mponina any. Tsy fahita firy any Laos ny famonoana olona sy herisetra mahery vaika hafa. Na dia ny halatra kely, ny hosoka amin'ny fizahan-tany sy ny fanararaotana noho ny fitakiana mafy ataon'ny mponina ao an-toerana mba handoa azy ireo na inona na inona, na dia ho an'ny resaka fohy aza, dia efa mandeha.
Ankoatr'izay, ny Laos dia manana ambaratonga mampatahotra ny kolikoly. Amin'ny fiampitan'ny sisintany dia manomboka manararaotra mpizahatany ireo mpizahatany ny mpizahatany mba tsy handoa hajia sy serivisy serivisy maro samihafa.
Toeram-pitrandrahana ao laos
Famantarana fampitandremana Laos
Nandritra ny Adin'i Vietnam, ny fiaramanidina amerikana dia nandatsaka baomba be tsy tany Vietnam, fa tao amin'ny Laos ihany koa. Noho izany, olona 200 isa isan-taona no maty noho ny daroka baomba amin'ny baomba tsy misy mody any Laos. Ilaina tsara ny fitandremana lehibe satria tsy misy marika ireo toerana marobe. Aza manalavitra ireo saha izay misy marika mena sy famantarana fampitandremana.
Coat of arm of Laos
Teny ofisialy - Laosianina
Renivohitra - Vientiane
Karazana governemanta - repoblika
Kaody finday: 856 +
Mihinana sakafo matsiro izy ireo 🙂